Ekpebiri Yeargwọ 2020 Afọ Ankarakart - RayHaber
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraEkpebiri Yearbọchị 2020 Ankarakart
13 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, Central Anatolia Region, Ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè, General, Ụzọ Awara Awara, KENSİÇİ Rail Systems, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Metro, Turkey, TELPHER 0
ankarakartin afọ ego kpebiri
Obodo Ankara ekpebiela ego visa nke Ankarakart, nke a na-eji ma ọ bụ na-efu ego na njem njem ọha, maka afọ 2020
Site na mkpebi a na-emekọrịtara ọnụ na nnọkọ August nke Mgbakọ Metropolitan, nke Onye isi obodo Ankara Mansur Yavaş na-ahụ, a na-ekwupụta ụgwọ maka ụgwọ ọhụrụ maka 'Ankarakarts' na-efu na ndị agadi na ndị ọrụ ọha mmadụ bi na Ankara maka otu afọ site na Jenụwarị 1.
Citizensmụ amaala dị n’agbata 61-65, TURKSTAT, PTT na Kaadị Ọhaneze na Onye Ozizi Pass, onye ga-eji EGO Buses, Metro, Ankaray na Teleferik, ga-akwụ ụgwọ visa ha n’agbata 1 Jenụwarị 2020-31 Disemba 2020:
Kaadị ndị anaghị akwụ ụgwọ maka okenye (61-65 Age): 120 lira
Kaadị TurkStat: 85 lira
PTT Kaadị: 85 lira
AKW PKWỌ PUBLIC: 85 lira
Onye nkuzi ngafe: 70 lira
Ebee ka Ankarakart ga - aga? Esi nweta Ankarakart? Ebee ka Ankarakart ahịa na-emeju ihe? 07 / 08 / 2014 Ankarakart ebe ịzụta, ga-esi Ankarakart, Ankarakart ndochi ihe ebe ahịa bụ: Ankara Metropolitan Municipality kpebiri iji zọpụta akwụkwọ kaadị site na kaadị moto jiipu. Ankarakart pụtara na ahịa iji zọpụta ọtụtụ nde ụmụ amaala na-eji kaadị. Ankarakart ebe ịzụta? Olee otú iji nweta Ankarakart? Ebe na-ejuputa ihe Ankarakart sales? Azịza ajụjụ. Olee otú iji nweta site Ankarakart Ankara Metropolitan Municipality ọdịmma? Mgbe Oriri nke Àjà, Dikimevi na Besevler kaadị e nwere ike iwere na si a ọdụ ụgbọ oloko, akwụkwọ nwere ike n'elu internet. Students enweghị akwụ ụgwọ akwụkwọ ikike ego ruo mgbe December 31 naanị-enwe ike inweta na n'ihi ego Ankarakart kwa 5. Cards 1 ...
Okporo ígwè System na Student Ụgwọ ndidi reroute | mastiff 03 / 07 / 2013 Nchikota Okporo ígwè Online Student Ụgwọ Belirlendi ọzọ na Samsun Transportation Center (UKOME) mkpebi nke ìhè okporo ígwè na ụgbọ ala awara awara n'ego ụgbọ nwere agbanwewokwa echiche na-amụrụ ego hikes n'ihi ụba akwụ ụgwọ na ha na-eme SAMULAŞ Inc. Akın Üner, General Manager, kwuru, ner Naanị ọnụahịa ụmụ akwụkwọ a zụlitere. 1 Dịka nke July, anyị agbakọtara 'ụmụ akwụkwọ kọleji na ụmụ akwụkwọ / nkuzi' n'okpuru otu ụlọ. Ntụle ụmụ akwụkwọ 75 nke 1.25 ka a mụbara gaa na 1 TL na onye mmụta / onye nkụzi na-esite na 1.25 gaa 1. Nakwa n'ụlọ akwụkwọ primrị 2. na XNUMX. Ndị gụsịrị akwụkwọ ga-eritekwa uru site n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-egosi ụgbọ ala na-akwụghị ụgwọ sınıf Isi: www.haberyurdum.com
Oge Ankarakart 1 na Ankara Malite na January 11 / 10 / 2013 Oge Ankarakart na Ankara 1 Amalite na Jenụwarị: Nkesa nke nkwekọrịta nkata na ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na isi obodo ahụ amalitela. Nkesa nke a na-acha uhie uhie na Ankarakarts nke ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na isi obodo ahụ malitere na Kızılay Metro Station na Ụlọ Mgbakọ obodo. 31 nwere ike itinye aka na kaadị ndị a ga-ere na Beşevler na Dikimevi Metro Stations mgbe Ememme Àjà, nke ga-adịrị ụmụ akwụkwọ ahụ ruo December, na-akwụghị ụgwọ ego. Kaadị nchekwa ndị nkụzi nwere ike ịnweta site na ịkwụ ụgwọ ego ga-enwe ohere maka ndị nwere nkwarụ n'efu. Ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na-eji tiketi ndị a na-akwụ ụgwọ, ụmụ akwụkwọ na Ankara Metropolitan Municipality Building and Metro distribution center öğrenci
Xanthi ego mgbanwe 31 TL maka ụmụ akwụkwọ ruo n'ọnwa Disemba 16 / 12 / 2013 31 5 TL maka ego ụmụ akwụkwọ maka ụmụ akwụkwọ ruo n'ọnwa Disemba: Obodo Ankara obodo ukwu ekpebiwo ịrụ ọrụ ndị dị mkpa maka ịkwaga ụgbọ elu na ebe ndị na-agaghị emerụ gburugburu ebe obibi na ndị mmadụ n'elu arịrịọ na mkpesa nke ụmụ amaala. 1 E kpebiri na ego Exchange Exchange Ankarakart, nke a ga-eji na bọs, metro na Ankaray malite na Jenụwarị, ga-anọgide na-abụ 5 TL maka ụmụ akwụkwọ. Tụkwasị na nke ahụ, a kpebiri ịmanye otu puku TL ụgwọ na nkwụgharị na-enweghị ikike na boulevards, n'okporo ámá ma ọ bụ n'okporo ámá ma na-erube isi n'iwu. Na nzuko nke Deputy Mayor Ali İhsan Ölmez, N
Ụgbọ njem nke ndị agadi na Ankarakart 14 / 01 / 2014 Okenye, Ankarakart ga-adị mfe ịnweta: Ụmụ amaala 65 dị n'isi obodo ahụ karịa afọ nke bọs ahụ, yana metro na Ankaray, nakwa n'oge ọ bụla, ha nwere ike ịgbago n'efu. A na-ekesa free Ankarakarts na agba odo, nke na-enye nnwere onwe maka ụmụ amaala agadi na njem obodo ukwu, na-aga n'ihu na 6 isi. Dị ka ozi nye site na ego General Manager Necmettin Tahiroğlu oroma free Ankarakart na agba, 60 afọ iji wuchaa 61 afọ na ụbọchị ebe na 75 TL Ẹkot ụmụ amaala bi Ankara, o dechara ya 64 afọ 65 afọ na ụbọchị ebe na Turkey bi n'ebe ọ bụla A na-enyekwa ụmụ amaala maka 5 TL. Ịnabata kaadị akwụmụgwọ ...
Ịkwụsị nke 5 Lira Kaadị Ụgwọ Na-akwụ maka Nkọwapụta 06 / 01 / 2016 Ugwo Kaadị maka Ankarakart 5 pound Cost nke kagbuo Rịọrọ: CHP Ankara osote onye Murat Eymir, maka kagbuo nke kaadị nke $ 5 ANKARAKART Consumer price ugwo maka ụlọ ke Cankaya District Governor rịọrọ ndị Board of Referees. Ịdị ire ezigbo ma ọ bụ ọrụ agaghị enwe ike ịkwado ezigbo ọrụ maọbụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị nọ na bọs ahụ na Ankara, ọ ga-ezuru iji tiketi ya, ma ọ bụ iji kwụọ ụgwọ maka ọnụahịa, ego, na iji bọs. " CHP Ankara Deputy Murat Eymir, ANKARAKART kwụrụ ụgwọ maka nkwụsị nke NL 5 TL ka ọ na-etinye aka na Kọmitii Mmekọrịta Ndị Ahịa na Gọọmenti Gọọmenti Çankaya, wee mee ka a tọhapụ ya. Eymir si ANKARAKART ...
ANKARAKART ga-abanye ELV 05 / 05 / 2017 ANKARAKART ga-abanye n'ụgbọelu: A na-ebufe tiketi electronic na AK ANKARAKART "usoro ihe eji eme njem na 168 ndị njem ụgbọ okporo ígwè (ÖTA) na-eje ozi na mpaghara Sincan-Ulus-Kızılay. Ngwa, 15 ga-amalite na Monday na May. Ndị bi n'obodo ukwu, bụ ndị na-erite uru site na ụgbọ ala ndị njem pụrụ iche maka njem njem ha, ga-eme njem site na iji GO ANKARAKART geçerli, nke dị irè n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè nke okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè EGO General Directorate, Ankaray, ụgbọ ala na ụgbọ ala. Emere mkpebi ahụ na UKOME "Ndị ọrụ ọchịchị na-ekwu na mkpebi nke nnwefe ịgbanwee aka na ANKARAKART usoro nke ELV bụ nke Transportation Coordination Centre (UKOME) na 21 nke April gasịrị, mgbe atụmatụ nke General Directorate nke EGO were. njem site tiketi lar
A ga-eji "Ankarakart" mee ihe na Başkentray Trains 25 / 12 / 2017 The Republic of Turkey State Railways (TCDD) Transportation Inc. Ankara Metropolitan Municipality General Directorate nke Ego, BAŞKENTRAY na Ankara, Sincan na Kayaş n'etiti ifè COMMUTER ụgbọ oloko, ga-arụkọ ọrụ maka mwekota nke Ankarakart tiketi usoro. Dị ka a dere na nkwupụta si Turkish State Railways Transport dị ka, COMMUTER ụgbọ oloko na Ankara, General Directorate nke Ego a ga-gụnyere na electronic ịkpatara collection usoro. COMMUTER ụgbọ oloko "Ankarakart" The protocol maka tụnyere ndị electronic ịkpatara collection usoro, 25 December na Ankara Metropolitan Municipality Presidency ga-aka n'etiti TCDD Transport Inc. na General Directorate nke Ego.
Akwụ ụgwọ afọ 2020 nke Ankarakart
Feesgwọ ego visa 2020 afọ nke Ankarakart
Ebee ka Ankarakart ga - aga? Esi nweta Ankarakart? Ebee ka Ankarakart ahịa na-emeju ihe?
Okporo ígwè System na Student Ụgwọ ndidi reroute | mastiff
Oge Ankarakart 1 na Ankara Malite na January
Xanthi ego mgbanwe 31 TL maka ụmụ akwụkwọ ruo n'ọnwa Disemba
Ụgbọ njem nke ndị agadi na Ankarakart
Ịkwụsị nke 5 Lira Kaadị Ụgwọ Na-akwụ maka Nkọwapụta
ANKARAKART ga-abanye ELV